Atụmatụ ụlọ nkwari akụ Radisson na Nigeria, Ivory Coast, Morocco, Tunisia, Niger na Guinea
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Atụmatụ ụlọ nkwari akụ Radisson na Nigeria, Ivory Coast, Morocco, Tunisia, Niger na Guinea
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Cote d'Ivoire • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Akụkọ okomoko • Akụkọ na -agbasa na Morocco • News • Akụkọ ọhụrụ Niger • Akụkọ Na -eme Nigeria • Resorts • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia
Ebumnuche mmepe nke Radisson Hotel Group na Africa bụ isi ebumnuche na njedebe 2022, atụmatụ atụmatụ ọrụ nke afọ ise nke Group, na ebumnuche nke ịbụ otu n'ime ụlọ ọrụ nkwari akụ atọ kachasị elu n'ụwa.
Ndị otu a nwere ụlọ nkwari akụ 90 na ime ụlọ 18,000 + na-arụ ọrụ na mmepe site n'ofe mba 31, ma na-ezube iru ụlọ nkwari akụ 130 na ime ụlọ 23,000+ n'Africa site na 2022.
Andrew McLachlan, Onye isi oche ndị isi, Development, Sub-Sahara Africa, Radisson Hotel Group, kwuru, sị: “Obi dị anyị ụtọ na anyị na-akpọsa ahịa ụlọ iri na họtel iri n’ime nanị ọnwa itoolu, nke pụtara ịbụ onye a bịanyere aka na ya kwa ọnwa. Ntinye aka ọ bụla dabara nke ọma iji wepụta atụmatụ mmepe nke afọ ise, site na ntinye ahịa ọhụrụ, iwebata ụdị ọhụụ na ịbuga uto dị elu na isi ụzọ Africa. N'afọ a, anyị ga-agbakwunye ụlọ 10+ na pọtụfoliyo anyị n'Africa ma na-eme atụmatụ ị ga n'ihu na-eto ngwa ngwa a site na mmụba ndị ọzọ n'ahịa ndị dị n'ofe kọntinent a na-enwe ọganihu. "
Na mgbakwunye na Radisson Hotel & Apartments Abidjan Plateau na Park Inn nke ụlọ nkwari akụ Radisson Lusaka Longacres kwupụtara na mbido afọ a, ụlọ ahịa ọhụụ asatọ ndị ọzọ fọdụrụnụ gụnyere:
Mkpoko Radisson Collection Ikoyi Lagos, Nigeria
Radisson Collection, nchịkọta ndụ ndụ otu otu nke ụlọ nkwari akụ pụrụ iche na ọnọdụ pụrụ iche na-eme ka ọ bụrụ nke izizi na Ikoyi, Lagos na ọ bụ 3rdIsslọ nkwari akụ Radisson gbasara mkpokọta na Africa. Hotellọ nkwari akụ a dị oke ọnụ ga-adị na mpaghara mara mma dị na Lagos Island, na nsọtụ Lagos Lagoon.
Emebere imeghe na 2020, ụlọ nkwari akụ ahụ ga-enwe ime ụlọ 165, gụnyere ọkọlọtọ nke oge a na ụlọ ndị isi na ụlọ ndị isi. Lọ oriri na ọ Theụ hotelụ ahụ ga-enwe ọtụtụ ihe oriri na ihe ọ drinkụ drinkụ na ebe isii dị iche iche emere maka ahụmịhe iri nri echetara echefu, gụnyere iri nri ụbọchị niile na ụlọ nri pụrụ iche yana ụlọ oriri na ọéụ andụ na ụlọ mmanya atọ ga -emepụta ọnọdụ mmekọrịta dị egwu. Hotellọ nkwari akụ ahụ ga-enwe nzukọ na ihe omume sara mbara, gụnyere ebe ntanetị asatọ nwere ike ịnabata ihe karịrị mmadụ 400. Oghere ndị ahụ ga-agụnye spa, mgbatị ahụ na ọdọ mmiri.
Na-ewebata ụlọ nkwari akụ mbụ Radisson nwere na Nigeria, akara ngosi dị elu nke na-eweta ọrụ ahaziri iche na oghere dị mma na nke oge a.
O di na Ikeja, isi obodo Lagos Steeti, otele a di na Mobolaji Anthony Highway, okporo uzo awara awara nke jikọtara Ikeja na ndi Lagos. Ọdụ ụgbọ elu mba ụwa, nke kpatara 50% nke ikuku ụgbọ elu na Nigeria dị 1km site na họtel.
Lọ nkwari akụ ahụ nwere ụlọ iri itoolu na abụọ nke gụnyere ime ụlọ na ọkọlọtọ yana ọnụ ọgụgụ dị elu maka ime obi ụtọ. Ọ na-egosipụtakwa ihe atọ dị iche iche, nri ime mmụọ na mpaghara na ihe ọ drinkụ drinkụ, gụnyere ụlọ oriri na ọ diningụ diningụ ụbọchị niile, ebe a na-a barụ mmanya na ọdọ mmiri Nzukọ na ihe omume, ga-agụnye ụzọ atọ dị iche iche na ebe azụmahịa. Na mgbakwunye, ụlọ nkwari akụ ahụ nwere ebe ezumike pụrụ iche maka ndị ọrụ ụgbọelu, spa, mgbatị ahụ na ọdọ mmiri.
Park Inn nke Radisson Serviced Apartment Lagos VI, Nigeria
Ihe ọzọ mebere izizi ya na Lagos bụ ụlọ elu na-eto ngwa ngwa, Park Inn nke Radisson, ga-emepe ụlọ a na-arụzi ọrụ, nke dịdebere Adetokunbo Ademola Street, isi boulevard dị na Victoria Island.
Thelọ nkwari akụ ahụ nke nwere ụlọ nkwari akụ 55 dị ugbu a, ụlọ nkwari akụ ahụ ga-enyekwa nri anọ na ihe ọ fourụ drinkụ mmanya mejupụtara nke ụlọ oriri na ọ diningụ diningụ ụbọchị niile, ụlọ mmanya na mbara ala abụọ. Nzukọ nzukọ na ihe omume nwere ụlọ nzukọ nzukọ atọ na-agbanwe agbanwe na-ekpuchi 120 sqm. Oge ezumike gụnyere mgbatị ahụ na ebe igwu mmiri.
Radisson RED Hotel Abidjan bụ Radisson Hotel Group nke abụọ Radisson RED bịanyere aka n'akwụkwọ n'Africa ma bụrụ ụlọ nkwari akụ nke mbụ na Abidjan, bụ isi obodo Africa. Thelọ nkwari akụ ahụ ga-adị na Boulevard de Gaulle, na nsọtụ ọdọ mmiri na Plateau, mpaghara azụmaahịa Premiya nke Francophone West Africa, na ezigbo obodo mepere emepe maka akara nke na-egwu egwuregwu na-agbanwe.
Hotellọ nkwari akụ a wuru ọhụrụ, nke a ga-emepe na 2021, ga-enwe ime ụlọ 165 gụnyere ọnụ ụlọ dị iche iche na nnukwu ime ụlọ nwere eserese nwere mgbidi mara mma yana imewe omume. Lọ oriri na ọ Theụ hotelụ a na-enye nri ga-agụnye Redeli, ezigbo nri na mkpụrụ obi nke ụlọ mmanya yana OuiBar, ụlọ elu ụlọ na mbara ala nke nwere obodo panoramic na echiche oke osimiri. Facilitieslọ ọrụ ntụrụndụ ga-agụnye ọdọ mmiri n'elu ụlọ na mgbatị ahụ zuru oke, na -emepụta mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta. Nzukọ nzukọ na ihe omume ga-emebi ọdịnala na ụlọ ihe omume nke oge a na ime ụlọ ọgụgụ anọ.
Radisson Blu nkwari akụ Casablanca:
Dị ka ụlọ nkwari akụ kachasị na-eto eto na Africa, Radisson Blu, ga-abanye na ọnụ ọgụgụ ego nke Africa, Casablanca, na mmeghe nke Radisson Blu Hotel, Casablanca na 2019. Thelọ nkwari akụ ahụ ga-adị na mpaghara azụmahịa obodo ahụ na n'ọnụ ụzọ nke isi na-adọrọ mmasị dị ka Old Medina na-achọsi ike (obodo ochie), Casablanca Marina na Alakụba Hassan nke Abụọ, ụlọ alakụba nke abụọ kasị ukwuu n'ụwa.
Hotellọ nkwari akụ ọhụrụ ahụ ga-enwe ime ụlọ 120, nwere ngwakọta nke ụlọ ndị mara mma na ndị nwere ọnụ. Site na ntinye sitere na nri mpaghara, ihe oriri na ihe ọ drinkụ drinkụ ga-agụnye ụlọ oriri na ọ barsụ andụ na ụlọ mmanya abụọ, yana ụlọ ọrụ ntụrụndụ nke nwere mgbatị ahụ zuru oke na ụlọ ngosi mara mma. Spacelọ nkwari akụ sara mbara nke nzukọ ga-ewu ebe mpaghara 456m².
Park Inn nke Radisson Tunis:
Radisson Hotel Group na-abanye n'isi obodo na obodo kachasị ukwuu na Tunisia na Park Inn nke Radisson Tunis. Thelọ nkwari akụ ahụ ga-adị na etiti obodo na-ekwo ekwo, naanị 5km site na ọdụ ụgbọ elu International nke Tunis-Carthage, na-adị mfe ịnweta okporo ụzọ. Ọ dịkwa ogologo njem site na ọdụ ụgbọ okporo ígwè Tunis na ebe azụmahịa nke Avenue Habib Bourguiba na Avenue Mohamed V. The Medina nwere ihe karịrị 700 ncheta, obí eze, mausoleums na nnukwu ụlọ alakụba dị naanị 1.5km site na họtel ahụ.
Lọ nkwari akụ ahụ ga-enwe ime ụlọ 102, yana ngwakọta nke ụlọ ndị a tụrụ atụ na nnukwu ụlọ. Nhọrọ na ihe ọ drinkụ drinkụ na-a drinkụ ga-agụnye ụlọ oriri na ọ restaurantụ andụ na ụlọ elu ụlọ, ebe ụlọ ezumike ga-agụnye mgbatị ahụ. A ga-akwado ụlọ nkwari akụ ahụ nke ọma maka nzukọ na ihe omume nwere oghere nzukọ sara mbara, nke a ga-ewu n'elu mpaghara 261m² ma nwee ọnụ ụlọ nzukọ atọ, ime ụlọ nzukọ atọ na ime ụlọ.
Banye n'ahịa ọhụrụ nke Africa, ụlọ ọhụrụ Radisson Blu Hotel, Niamey ga-emeghe na 2019. Niger, isi obodo Niger na ebe a na-akpọ Francophone West Africa bụ akụkụ nke ECOWAS nakwa na ọ ga-ewusi usoro Radisson Hotel Group ike na West Africa. Lọ nkwari akụ ahụ ga-eduga ahịa ahụ dị ka Niamey n'ihi na ọ na-ejupụta n'ụgwọ nke ụlọ ahịa ndị a ma ama nke mba ụwa na mpaghara ahụ.
Hotellọ nkwari akụ ahụ nke nwere ọnụ ụlọ 196 ga-agụnye ụdị ụlọ ise dị iche iche, gụnyere nke ndị isi ala na nke ndị eze. Ihe oriri na ihe ọ drinkụ drinkụ na-a drinkụ ihe ọ offerụ willụ ga-enyekwa ọtụtụ nhọrọ gụnyere ụlọ nri abụọ, Ogwe abụọ na ebe ezumike otu. Nnukwu nzukọ na ihe omume ga-agafe mpaghara 1252m², gụnyere ụlọ nzukọ, ebe azụmahịa na ụlọ nzukọ dị iche iche. Lọ nkwari akụ ahụ ga-enwekwa spa, ime ụlọ ahụike na ọdọ mmiri.
Radisson Blu Hotel Conakry, Republic nke Guinea
Radisson Blu na-abanye na Conakry, isi obodo Guinea na isi nke Francophone West Africa ma na-eme atụmatụ imeghe na 2019. Thelọ nkwari akụ ahụ ga-eduga ahịa ahịa nkwari akụ nke Conakry na ọnọdụ mbụ ya, nnweta, na akara ngosi elu nke mba dị elu.
A na-edebe nkwari akụ ahụ n'akụkụ obodo ahụ ma gbaa ya gburugburu, Convention Center, Palais du Peuple, Hospitallọ Ọgwụ Mba na ọtụtụ ndị nnọchi anya obodo. Ọdụ ụgbọ elu International nke Conakry bụ ihe na-erughị 10km.
Lọ nkwari akụ ahụ nwere ọnụ ụlọ ihi ụra 123, nke nwere ụdị ime ụlọ ise dị iche iche, gụnyere ụlọ ndị isi ala abụọ. Nri na ihe ọ andụ drinkụ na-enye ụbọchị niile na ụlọ oriri na ọ specialụ specialụ ndị pụrụ iche, ime ụlọ ọdọ mmiri na ebe ị barụ mmanya. Nzukọ na ihe omume gbasaa karịa 415m² nke nwere ụlọ nzukọ anọ na-agbanwe agbanwe. Lọ nkwari akụ ahụ ga-enwekwa spa, ebe mgbatị ahụ na ebe igwu mmiri.